को जांघ quadriceps कहाँ छ र यसको कार्य के हो
को जांघ र यसको पार्श्व सतह को एक भाग को सामने सतह अलग टाउको सुरु जो quadriceps मांसपेशी लिन्छ। तिनीहरूले कण्डरा एकताबद्ध छन् गोडा, को tuberosity गर्न संलग्न अन स्थित तिबिया, र घुडाको पांग्रा कवर।
Quadriceps - चार टाउको को एक सेट, र तिनीहरूलाई को सबैभन्दा लामो पूर्ण जांघ को सामने सतह कवर जो rectus abdominis छ। यो आफ्नो अगाडि कम अक्ष तल देखि शीर्षक कण्डरा को भाग हो जो एक संकीर्ण कण्डरा, पारित nadvertluzhnoy खातिका मा सुरु हुन्छ।
विस्तृत medial पेशी हिप तल्लो आधा स्थित र यसको medial पिछला सतह लाग्छ। यसलाई कुनै न कुनै लाइन बाट स्रोत, र यसको medial ओठ downwardly र व्यापक कण्डरा मा रूपान्तरित विस्तार मा आंशिक यसको समर्थन हड्डी जोड्ने तन्तु गठन, प्रत्यक्ष मांसपेशी संग intertwine र patella किनारा संलग्न छ।
अर्को टाउको सामने पार्श्व सतह ओगटेको र जांघ को vastus lateralis मांसपेशी भनिन्छ। त्यो बन्द अलि र rectus मांसपेशीमा Lata को fascia फाटो कि छ। यो क्षेत्र मा, व्यापक हिप लाइन बाट सुरु जहाँ ठूलो trochanter, intertrochanteric लाइन र पार्श्व ओठ। यो साधारण कण्डरा को भाग हो, र समर्थन पार्श्व patellar कण्डरा को गठन संलग्न छ जो व्यापक कण्डरा, तल जान्छ।
चौथो टाउको - एक व्यापक मध्यवर्ती मांसपेशी, को medial र पार्श्व मांसपेशीमा बीच स्थित छ जो। यो प्रत्यक्ष अन्तर्गत छ को जांघ को मांसपेशी र टाउको को weakest छ। को femur को सामने विमान यसको मूल लिएर पनि कण्डरा को आधा लम्बाइ गर्न मध्यवर्ती हात पालो मा, rectus मांसपेशी कण्डरा संलग्न छ र कण्डरा कुल जान्छ जो, व्यापक, जान्छ।
Quadriceps, triceps साथै जांघ मांसपेशी रूपमा आधारभूत समस्या जो घुँडा सीधा छ solves र rectus पनि हिप फ्लेक्स गर्न मद्दत गर्छ। यो शरीरको वजन सामना गर्न गोडा संयुक्त मद्दत गर्छ त्यो धेरै बलियो र ठूलो छ। Quadriceps femoris यो एक गतिशील छ अझै पनि खडा गर्दा जो घुँडा tucking रोक्छ आन्दोलन समयमा मेपल सीधा मा निर्वाचकगण र स्थिर, दुई कार्य छ।
सबै मांसपेशीमा एक निश्चित लोड आवश्यक पर्दछ। quadriceps सफलतापूर्वक आफ्नो मुख्य कार्य पूरा गर्न, यो निरन्तर राम्रो आकारमा कायम गर्न आवश्यक छ। यस्तो क्लासिक रूपमा यो राम्रो अभ्यास लागि सिट-अप, उठबस एक फलाम को दंड वा dumbbells, खुट्टा प्रेस संग, dumbbells संग lunges।
अगाडि वा पक्ष मार जब मांसपेशी को Bruising उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो गोडा र गति को दायरा दुखाइ र सुनिंनु, सँगसँगै छ हिप संयुक्त कम छ। यी लक्षण खुलारूपमा प्रभाव को शक्ति मा निर्भर गर्दछ। पछि एक सानो आकार मा वृद्धि चोट वा hematoma समय संग, प्रकट धमकना सक्छ। यो कम खुट्टा वा खुट्टा उत्प्रेरित गर्छ कहिलेकाहीं छन्। को quadriceps को चोट को निदान एक डाक्टर बनना, तपाईं अन्य सम्भव क्षति निकाल्न आवश्यक छ किनभने। अल्ट्रासाउंड प्रयोग गरेर hematoma र मांसपेशी दोष को आकार मापन रूपमा, एक भंग, radiography कि जाँच गर्न।
केही अवस्थामा, यस्तो जटिलताहरू subfascial रूपमा मांसपेशी मा उत्पन्न गर्न सक्छ hypertensive सिंड्रोम, अर्थात् pinching र myositis ossificans, क्याल्सियम लवण को जम्मा द्वारा विशेषता। पछि Quadriceps मांसपेशी एक चोट painkillers द्वारा उपचार छ, को गोडा संयुक्त यसको बल र गतिशीलता खुलिरहेको nonsteroidal विरोधी-भडकाऊ दबाइहरु प्रयोग myositis रोकथाम आयोजित।
एक मीटर के हो?
महत्वपूर्ण विश्लेषण: प्रकार, विधि र अवधारणाहरु
घटनाको सम्भावना के छ? परीक्षा लागि तयार विद्यार्थीहरु मदत
पक्ष - यो छ ... यो सबै शब्दहरूको सन्दर्भ र स्कोप निर्भर
समाजशास्त्र विषय र यसको ऐतिहासिक गठन
आन्तरिक कार्य राज्य को
घर मा मिनी phalaenopsis सुनगाभाहरू: खेती, हेरविचार र समीक्षा सुविधाहरू
EAEC - यो के हो? यूरेशियन आर्थिक संघ: देशहरूमा
को "यिन-यांग": Opposites को सुरिलो फ्युजन
आफ्नै हात संग सराय देखि शिल्प
"स्वास्थ्य कार्यशाला": प्रशंसापत्र
बत्ती डायोड छत कसरी चयन गर्ने?
Adat - यो के हो? शब्द को परिभाषा
बहुमूल्य हरियो: नाम, विशेषताहरु र वर्णन को सूची
एरिजोना - सक्रिय र स्टाइलिश लागि पिउन
तेर्सो अपकेंद्र पंप: प्रकार र विशेषताहरु
कार "अल्फा रोमियो 164" (अल्फा रोमियो): वर्णन, विशेषताहरु, फोटो